Roulette kunye neCherry nePoppy
I-Roll nge imbewu ye-cherry ne-poppy
I-Poppy roll ne-cherry I-assortment yezinto ezibhakabhaka ezikhethiweyo zihluke kakhulu, kodwa yintoni enokuba yinto enomnandi kunamakha, kunye ne-golden crust yokupheka ephekwe kwimvubelo yesonka. Nge jam, jam, apula, ipums; itiye, ikhofi, ubisi okanye njengaye. Wonke umntu uyayithanda le batch! Namhlanje ndinomqulu wee-cherries kunye neepoppy, uhlobo lwe-tandem: ezibini kwelinye, apho umnqweno omncinci ugxininisa umdla we-poppy elimnandi.
Ubisi 250 ml
Ukhula lwegrosi 500 g
I-vanilla ye-Sugar 10 g
I-Sugar 5 tbsp. l.
I Cherry efriziwe 200 g
I-potato isitashi 1 tbsp. l.
Inyathelo 1 Ukulungiselela intlama yomqulu oyifunayo: ubisi, amaqanda, imvubelo eyomileyo, iswekile, ishukela le-vanilla, ityuwa, ibhotela kunye nomgubo.
Inyathelo 2 Ukuzaliswa, udinga imbewu ye-cherry ne-poppy. Iikherries zinokutsha okanye ziqhenqele, kubaluleke kakhulu - ngaphandle kwemigodi.
Inyathelo 3 Ubisi olufudumeleyo uthele imvubelo eyomileyo kunye neepunipoyi ezincinci zeswekile. Yiyeke imizuzu eyi-10.
Inyathelo 4 Xa imbiliso sele ichithwe ngobisi, faka ishukela esele kunye netyuwa.
Inyathelo 5 Ukubetha amaqanda ama-2. Sidibanisa nobisi, imvubelo kunye noshukela.
Inyathelo 6 Kwisitya esihlukileyo siphuca umgubo. Oku kuyimfuneko ukwenzela ukucebisa umgubo kunye ne-oxygen kunye nokususa ukungcola okungaphezulu.
Inyathelo 7 Ngomgubo ogqithisiweyo uphulule umxube wamanzi. Emva koko, kwiincinci ezincinci, faka ibhotela. Ekugqibeleni, faka i-vanilla ishukela. Knead intambo epholileyo, ecocekileyo. Ngokumalunga nomlinganiselo womgubo, ungaba ngaphezulu okanye ngaphantsi. Konke kuxhomekeke kumgangatho womgubo ngokwawo. Akuyimfuneko ukuba "hammer" kakhulu ngomgubo. Kwinkqubo yokusika, umgubo usasaza. Sifaka inhlama ebhodweni okanye ngesitya, siwugubungele ngesilu ecocekileyo uze usibeke kwindawo efudumeleyo yeeyure eziyi-1-1.5.
Inyathelo 8 Inhlama ikhulile kwaye yanda ngobukhulu ngamaxesha ama-2. Ngoku sekulungele ukunqunyulwa.
Isinyathelo 9 Kwezithako ezinikezwe kwi-recipe, ufumana ii-rolls ezi-2. Inhlama iyahlula ibe malunga ne-4. Ukufafaza ngokuthe gca itafile ngomgubo uze uphume iqhekeza elinye.
Inyathelo 10 Phuma umgca wehlama kunye nesitashi kwaye usasaze i-cherry kuso. Isitashi siya kuthatha ijusi lokungcebele kwaye ayiyi kuphuma kwi-roll xa ibhaka.
Inyathelo 11 Gcwalisa umqulu kunye ne-cherry.
Isinyathelo 12 Hlela enye inxalenye yesifundo kwaye usasaze ukuzaliswa kwepoppy. I-Poppy idinga ukuthunyelwa ngamanzi ambalwa kwaye ubilise malunga nemizuzu eyi-10. Emva koko cima amanzi, yongeza ushukela ukunambitha uze uyichoboze emdakeni. Ukuba akukho mhlaba, i-grinder ye-coffee grinder iya kuyenza. Umsebenzi wethu kukugaya imbewu ye-poppy kunye noshukela.
Inyathelo 13 Fold roll with seedpop seeds. Ifunyenwe 2 yale miqulu.
Inyathelo 14 Siphambukisa le miqulu kwi-braid enjalo.
Inyathelo 15 Lungisa isidlo sokupheka uze ufake umqulu. Makhe amise imizuzu engama-20-25 kwiqondo lokushisa, ukuze avuke kancane.
Inyathelo 16 Lungisa i-yolk yeqanda uze ubeke kwi-oven uvutha kwi-175-180 ° C malunga nemizuzu engama-40. Ixesha lokubhaka lixhomekeke kwihovini.
Inyathelo 17 Umqulu ulungele.
Focaccia nge cherry
Izilwanyana zamanqanaba ezinyawo
AmaLatk of amazambane kunye neenqathe
Iimpawu zonyango kunye nemilingo ye-diopside
I-Mackerel ibhaka ngegalikhi kunye neparsley
Izakhiwo eziyingqayizivele zelitye le -lexandrite
Apple casserole nge sinamoni